Sidee inuu ka soo kabsado formatted Photos?
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado formatted Photos
Waa dhibaato guud oo aad si qalad ah qaab aad kaadhka xusuusta camera. Iyo kaamirooyin ugu kuu siiyaan ikhtiyaar ah "qaab" in ay tirtirto oo dhan sawiradaada. Hadda waa in aad ka welwelina si ay u baadhaan internetka: sida aan kartaa kabsado photos formatted ?
In arrin xaqiiqada, ugu kamaradaha digital maalmahan HA tirtirto sawirada joogto ah ka kaadhka xusuusta (kaarka SD) marka aad tirtirto photos isticmaalaya button Qaabka ah. Sidaas uma baahnid inaad si aad ka welwelsan tahay in aad isticmaalayso ah Nikon, Sony ama Canon, aad u heysanaa fursad fiican in ay soo kabsadaan photos formatted .
Laakiin waxaa jira hal wax oo waa in aad lacag bixisid si aad fiiro ka. Tani waa waxa ku dhacay saaxiib Rachel aan. Waxay u tagtay Paris xagaagan oo qaaday badan oo sawiro cajiib ah. Tan iyo markii ay ka kamarada cusub oo aan sidaas aqoon u leh ay socod, si qalad ah iyadu formatted card SD ay. Dhamaan sawirada waxaa lagu sameeyey. Waxay raadinaya siyaabo ay ku soo kabsadaan ka photos formatted laakiin dhanka kale iyada weli la isticmaalayo camera iyo kaadhka xusuusta isku mid ah. Markaas waxaan u sheegay iyada waa mid aad qalad sawiro cusub, maxaa yeelay, overwrite doonaa meel bannaan oo ah halka kuwii hore ku yaalaan. Markaas waxa ay u muuqataa in ay kaliya soo kaban karto, qeybo ka mid ah sawirrada ee Paris, iyo qaar ka mid ah kuwaas in dhamaystiran.
Inkasta oo Raaxeel waayo-aragnimo kabashada aan waa guul wayn, aan weli baran kartaa tallaabooyinka. Haddaba sidaas daraaddeed waxaan idin ​​siin doonaa tallaabo in aan xoojinno hage ku saabsan sida loo soo kabsado photos formatted .
Sidee inuu ka soo kabsado photos formatted?
Waxaan la isticmaalayo Wondershare Photo Recovery. Download iyo Free rakibi Photo Recovery hoos ku qoran.
Talaabada 1: Isku kaarka formatted in computer
Isticmaal akhristaha kaarka in ay ku xidhmaan kaarka camera formatted in computer ah iyo in la hubiyo halkaas oo uu ku yaal.
Tallaabo 2: Ku rakib Photo Recovery
Download iyo rakibi version xorta ah ee Wondershare Photo Recovery. Ha u soo dajiyo on kaadhka xusuusta kaas oo aad u rabto in aad u soo kabsado photos formatted . "Ka bilow" kabashada hadda.
Talaabada 3: Sawirka kaarka
Ka dib markii laga bilaabo Wondershare Photo Recovery, dooran kaarka oo uu bilaabo inuu "Scan" xogta formatted.
Talaabada 4: Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh
Hadda waxaad ka heli liiska oo dhan photos recoverable on kaadhka xusuusta aad. Iyaga Guudmar mid mid si uu u hubiyo tayada.
Talaabada 5: kabtay oo badbaadiyo
Fiiri kuwa aad dib u doonayaan inay "Ladnaansho". Xasuusnow ma ku kaydi si kaarka kaas oo aad u soo kabsado photos formatted .
Recovery Qaabka: Ladnaansho Files ka dib markii formatting dhakhso ah uuga
Sidee inuu ka soo kabsado Email tirtiray Muuqaalka